Bisha wanaagsan, waxaa laga yaabaa inaan hoos u dhigo $ 300, oo ka fog $ 10k + in John Chow hoos u jiido, laakiin wali waa la ixtiraami karaa ra'yigeyga. Waxaad ogaan doontaa in boggeyga gurigeygu nadiif ka yahay dhammaan xayeysiinta. Waan dhigi kari lahaa xayeysiis meel walba dushiisa, laakiin ma doonayo inaan ku riixo xayeysiiska martida ku soo laabata boggeyga marar badan. Taabadalkeed, waxaan u adeegsadaa xayeysiiska dadka waawayn ee igu dhaca si dadban, aniga oo u maraya raadinta iyo tixraacyada.
Furaha Xayeysiiska Text Link guushu waa in loo dhisay baloog, ma aha degel internet. Xitaa waxay siinayaan qalab loogu talagalay isticmaaleyaasha WordPress si ay uga dhigaan xitaa sahlan. Xayeysiiyayaashu waxay iibsan karaan 'qoraallo' halkii ay ka gadan lahaayeen ereyo. Taasi waa sahlanaan layaableh, baloogleeyaha iyo xayeysiiyaha labadaba. Haddii aad ku qorto qoraal mawduuc la siiyay, miyaanay ahayn wax laga cabsado inaad iibsan karto mowduuc aad ogtahay inuu ku taageerayo alaabtaada? Fursad qurux badan.